ललिता निवास प्रकरण : अख्तियारले आरोपित गरेकैमाथि पनि किन थप मुद्दा लैजाँदैछ सीआईबी ? | Ratopati
ललिता निवास प्रकरण : अख्तियारले आरोपित गरेकैमाथि पनि किन थप मुद्दा लैजाँदैछ सीआईबी ?
करिब ३ सयविरुद्ध मुद्दा लैजाने तयारीमा सीआईबी
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeपुस १९, २०७८ chat_bubble_outline0
पुस १८ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट करिब २ सय २० जनामाथि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर भइसकेका बाहेक पनि अन्य केही व्यक्तिमाथि सीआईबीले मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास रहेको सरकारी जग्गा जफत फिर्ताको नाममा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर १३७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गायब पारिएको सम्बन्धमा यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । अख्तियारले दोषीलाई कारबाही गर्ने जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा चलिरहँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएर करिब ३ सय जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०२३ सालदेखि सरकारी जग्गामा भएको गडबड र घोटालाको फेहरिस्त खोज्दै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका करिब ३ सय जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । जसमध्ये २२० भन्दा बढीमाथि पक्राउ पुर्जीका लागि लेखि पठाइएको छ । त्यसमध्ये अधिकांशको पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको र केहीको जारी हुने क्रममा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौँले बताएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दासँगै सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही मुद्दामा सीआईबीले करिब ३ सय जनाविरुद्ध मुद्दा लिएर जान लागेको हो ।
यसअघि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर लाभ लिने वा लाभ नलिए पनि पदको दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेल्ने तीनजना मुख्य अभियुक्त र जग्गा जफत प्रयोजनका लागि हालका जग्गाधनी समेतलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दासँगै सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही मुद्दामा सीआईबीले करिब ३ सय जनाविरुद्ध मुद्दा लिएर जान लागेको हो । २०२३ सालदेखिकै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति, तिनका आफन्त, जग्गाको किनबेचमा जोडिएका बीचका व्यक्ति आदि सबैलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी मुद्दा लैजान लागिएको हो । त्यसका लागि सम्भव भए तत्काल पक्राउ गरेर बुझाउने, सम्भव नभए पक्राउ पुर्जी लिएर फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ । त्यसैका लागि सीआईबीले हालसम्म २२० जनाभन्दा बढीको पक्राउ पुर्जी लिइसकेको बताइएको छ ।
सरकारी जग्गामा मोही वा जोताहा पनि नलाग्ने र गुठीमा पनि नजाने कानुनी व्यवस्था भएकै कारण निवेदन दिनेहरूलाई लिखितरुपमा मोही नलाग्ने भन्दै जोताहाका रूपमा ती जग्गाहरू उब्जनी गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै दिइएको थियो । सोही समयमा जसको जग्गा अधिग्रहण भएको थियो, ती व्यक्तिले निवेदन दिएर आफूलाई जग्गा नपुगेको कारण पाएको पाएको मुआब्जा फिर्ता गर्ने तर उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइदिन आग्रह गरे । तत्कालीन राजदरवारसँग नजिक रहेका ती व्यक्तिको निवेदन बमोजिम राजदरबारले ती राणा परिवारका सदस्यलाई निजको अधिग्रहणमा परेको जग्गामध्ये ८ रोपनी जग्गा बुझेको मुआब्जा फिर्ता गरेर जग्गा दिने गरी लालमोहर लगाइदियो । त्यसपछि ती व्यक्तिले उक्त जग्गा फिर्ता पाए । बाँकी जग्गा भने कुनै त्यसै बाँझो नै थियो भने कुनै जग्गा मोही नलाग्ने गरी केही व्यक्तिहरूले जोतपोत गरिरहेका थिए ।
सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानको उद्देश्य पनि व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रयोजन रहेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । त्यसका लागि लामो अनुसन्धान गरेर अब करिब ३ सय जनाविरुद्ध मुद्दा लैजाने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सीआईबीले हाल सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले २०२३ सालदेखिको कागजातको अध्ययन, कुन कुन मितिमा कुन कुन निर्णयका आधारमा कहाँ कहाँ कसरी गडबड भयो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका लागि हाल जग्गाधनीमा नाम नभएका तर बीचमा जग्गाको किनबेच गर्ने सबै व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यो प्रकरणमा यसअघि नै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि पर्ने सीआईबी स्रोतको दाबी छ । सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारी कर्मचारी, गुठी संस्थानका कर्मचारी र प्रतिनिधि, मोही बनाइएका व्यक्तिहरू, नक्कली मोहीहरू, राणा परिवार, भूमाफिया, जग्गा किनबेचमा संलग्न व्यक्तिहरू, हालका जग्गाधनी आदि सबैलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको छ । सोही प्रयोजनका लागि करिब ३ सय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको माग गर्दै निवेदन दिइसकिएको वा दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
सीआईबी स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका अधिकांश व्यक्ति फरार छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश भारत, थाइल्याण्ड लगायतका देशमा बसेका सूचना सीआईबीले पाएको छ । कतिपय व्यक्तिहरू काठमाडौँ लगायत देशमै आफन्तको घरमा लुकेर बसेको पनि सीआईबीको दाबी छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई समयमै पक्राउ गर्न नसके फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा चलाउने सीआईबीको तयारी छ । त्यसका लागि सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पुस २७ गतेभित्रै ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ ।
ललिता निवास प्रकरण : ४ जना डिएसपी लिखत किर्तेबारे अनुसन्धान गर्दै
ललिता निवास प्रकरण : ‘कीर्ते’ मुद्दामा सीआईबीद्वारा थप २ जना पक्राउ